Ihowuliseyili Power icandelo mveliso kunye nabathengisi | NzuluFast
Icandelo lamandla lelona candelo libaluleke kakhulu kwimoto ewela ezantsi. Sichaza icandelo lamandla ngobubanzi beetyhubhu zalo zangaphandle. Uqwalaselo lwe-rotor / stator lobe kunye nenani lamanqanaba. I-SGDF inokubonelela ngeemoto ukusuka kwi-2 7/8 ukuya kwi-11 1/4. Ngokwesiqhelo, imoto inokukhupha amandla amakhulu kunye namandla njengoko ityhubhu inyuke. I-Rotor kunye ne-stator ziyilelwe njengezinto ze-helical ezinobukhulu obukhulu kunye nobuncinci. I-lobe yimilo ejikelezayo egobile eyenziwe ngumahluko kububanzi obukhulu kunye obuncinci.
I-stator ine-lobe enye ngaphezulu kune-Rotor. Umahluko kwii-lobes wenza indawo yokungena engamanzi (umgodi) apho ulwelo lunokumpompwa khona ukwenza ujikelezo. Isigaba ngumgama olinganiswe ngokuhambelana ne-axis phakathi kweendawo ezimbini ezihambelanayo ze-lobe efanayo .Lo mgama ubizwa ngokuba ngumkhokeli we-stator. Isantya kunye nesantya sokukala sinokuhluka ngokutshintsha kweelobes kunye namanqanaba. Ngokubanzi, imoto ene-lobes engaphezulu inokwenza i-torque engakumbi, imoto ene-lobes encinci inokuba nesantya esiphezulu. Kwelinye icala, itorque inokunyuswa ngokongeza amanqanaba. Ke, zimbini iindlela zokunyusa i-torque: okokuqala, yandisa i-rotor / stator lobes; Okwesibini, nyusa amanqanaba emoto.
Ukuxhathisa ioyile kunye namanzi
Senza uphuhliso lweelastomer kunye nokuvelisa sisebenzisana namaziko emfundo kunye nezenzululwazi eYurophu kwizisombululo eziphambili.
Umxokelelwano wethu wokubonelela ngabavelisi bentsimbi kunye nodumo oluqaqambileyo lwesizwe nakwamanye amazwe lusivumela ukuba sizise iimoto ezizinzileyo kwintengiso. Ukukhetha kwethu ngononophelo amabakala emathiriyeli ekhethekileyo kwiimoto zethu kubonelela ngokusebenza okufunekayo.
Ukulingana okufanelekileyo kunye nobomi obude beelastomers zethu zenza umahluko ekusebenzeni. Sisebenzisa ulwazi lwethu olunzulu lwe-physics ngqo kwimveliso kwiziphumo abathengi bethu abathembele kuyo yonke imihla.
IIMPAWU ZECANDELO LAMANDLA
Ubuncinci i-30 ukuya kwi-50% yetorque engaphezulu kuneemoto eziqhelekileyo ezihla.
Ixesha elide lokuPhila
Ubuncinci i-50 ukuya kwi-100% yokusebenza ephuculweyo xa kuthelekiswa naleyo yeemotor eziqhelekileyo zaphantsi ngenxa yemitshini yokugaya oomatshini abahlanu be-rotors kunye ne-stators.
Ifanele amaqondo obushushu aphezulu
Egqithileyo Amanqanaba amabini kunye nezixhobo ezimbini zokomba izixhobo
Okulandelayo: Imoto yaphantsi
Icandelo le-120mm laMandla
Icandelo leMandla le-135mm
Icandelo leMandla le-165mm
Icandelo leMandla le-95mm